ပန်ဒိုရာ: P & Perfection
Let me guess another catchy title for this post. How about "P for Perfect", Pandora?
P for ....... ?? :) :P
Probably trying to say..
Pandora & Perfection. :D
မျက်စိကိုလည်နေတာပဲ 3D လားလို့ အတင်းလိုက်ကြည့်နေတာ :D တုံးလိုက်တဲ့ ကျန်စစ်ပါလားနော်
your definition of perfect is really perfect
တစ်မျိုးလေးပဲနော်.. ဒါပေမယ့် ဘာကိုဆိုလိုမှန်း မသိဘူးဖြစ်နေတယ်.. ဗြဲ................
p for perfect ကတော့ desired outcome ဖြစ်မယ်။
ဘာကြီးဖြစ်ဖြစ် လာအားပေးကြသူများ ကျေးဇူးအထူးဗျို့။
...."P & Perfection" ကို သေချာစွာကြည့်သွား ပါတယ်.....ကဗျာတွေ ပါဖတ်ကြည့်သွားပါတယ်....
မသိပါဘူး ဇော်ဂျီ အခပ်မသင့်လို့သင်္ကေတတွေပြ နေတဲ့ပို့ စ် ထင်လို့ ။ art ကို မကြည့်တတ်တော့ ခက်တာဘဲ။ တည့်တည့်ပြောမှ သိတယ်။ နေအုန်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဆုံး တည်တဲ့ အင်္ဂလန်က တယ်ရီစကုပ်ကြီး မဖျက်သိမ်းခင် ဆွဲကြည့်အုန်းမှ..